FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY COTON DE TULEAR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Coton de Tulear
Namboarina daholo i Furio, lehilahy iray Coton de Tulear
Lisitry ny alika mifangaro Coton de Tulear
Cah-ton avy amin'i Tu-lay-ahr
'Coton' no teny frantsay ilazana ny landihazo. Toy ny lazain'ny anarana, ny mampiavaka an'i Coton de Tulear dia ny palitaony, izay cottony na malefaka fa tsy landy. Manana akanjo lava lava ity. Manarona ny tongotr'akanjo malefaka sy malefaka ny volo mena. Ny loko dia fotsy, fotsy misy voasarimakirana, fotsy misy loko volontany, fotsy misy mainty, fotsy misy volondavenona na misy loko triatra. (Ny fotsy madio dia tian'ny mpiompy fampisehoana.) Ny sasany misy marika mavo somary mavo amin'ny sofina.
Alika karazana Bichon io. Tena sariaka izy, malefaka, be fitiavana ary mailaka. Ny cotons dia alika be fiarahamonina izay mifanerasera tsara amin'ny ankizy, alika hafa ary biby. Tena mifatotra amin'ny tranony sy ny tompony izy, maniry ny ho eo akaikin'izy ireo mandrakariva ary manandrana manao izay azony atao mba hampifaliana. Ny Coton dia manao mpiambina tsara. Feno hafetsena sy fahagagana hanatanterahana ny fanirian'ny tompony rehetra. Ny iray amin'ireo toetrany manintona indrindra dia ny fironana hitsambikina sy handeha amin'ny tongony aoriana. Ny fanehoan-kevitr'izy ireo dia manatsara ny trano rehetra izay vonona handany fotoana fohy isan'andro amin'ny filalaovana lalao sy fikolokoloana ilaina. Mianatra haingana dia haingana ny Coton, saingy mety ho maditra kely tsy misy fitarihana mety. Manan-tsaina izy ireo ary dodona ny hiasa. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana misoroka Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia canine fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Hahavony: 10 - 12 santimetatra (25 - 30 cm)
Lanja: 12 - 15 pounds (5,5 - 7 kg)
Ny Coton dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany.
Cotons tia milomano sy milalao. Ankafizin'izy ireo ny toerana malalaka ary afaka manaraka ny tompony amin'ny soavaly an-kilaometatra maro. Mahomby amin'ny sehatry ny fanatanjahan-tena amin'ny alika izy ireo, toy ny fitsapana ny fahaizany mandingana sy ny haza. Na dia mihetsiketsika tahaka azy ireo aza izy ireo, dia hifanaraka tsara amin'ny toe-javatra misy ny fianakaviana, raha toa ka raisina ho a mandeha isan'andro .
Tokony ho 14-16 taona eo ho eo.
Ny volo lava sy miloko volo dia mitaky fikolokoloana tsara isan’andro. Ny volony maty dia tokony hosehina ary hodorana. Ny volo be loatra eo anelanelan'ny lamban'ny tongotra sy ny sofina ao anatiny dia tokony hesorina. Tsy mila fandroana mihoatra ny indray mandeha na indroa isan-taona izy ireo izay ho ampy mba hitazomana azy ireo hadio. Ny palitao dia tsy tokony hety. Cotons nandatsaka kely tsy misy volo. Ity karazany ity dia tsara ho an'ny marary allergy .
Ny Coton dia karazana Bichon mifandraika amin'ny French Bichons sy ny Italian Bolognese. Azo atao mihitsy aza amin'ny tranga sasany fa alika tompon-tany hafa karazana no crossbred. Azo inoana fa tonga teto Madagascar niaraka tamin'ny tafika frantsay, na niaraka tamin'ireo mpitantana izay nanara-dia. Tsy dia fantatra loatra ny karazany raha tsy efa naverina tany Eropa sy Amerika tao anatin'ny 20 taona lasa. Nandritra ny taonjato maro, ny Coton dia sakaizan'ny mponina mpanankarena ao Toliara, any atsimon'i Madagasikara, izay nanoratany karazany hatrany. Alika iray manana fiaviany mitovy amin'izany no nalaza tany amin'ny nosy La Réunion frantsay, amoron'ny morontsiraka atsinanan'i Madagascar, nefa nanjary lany tamingana . Ilay karazana Bichon tany am-boalohany dia niitatra niverina arivo taona lasa izay na mihoatra. Na dia mbola tsy fahita firy aza dia nankafy ny lazany tamin'ny kilasy ambony Madagascar nandritra ny taona maro ary nanjary nalaza tany Etazonia. Ny karazana dia eken'ny FCI tamin'ny taona 1970. Ny Coton no 'Alika ofisialin'i Madagascar', ary Coton tricolor dia nomem-boninahitra tamin'ny hajia paositra tamin'ny 1974. Ny Coton de Tulear dia neken'ny AKC tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2014.
Gun Dog, vondrona mpanaradia
Sary natolotry ny Chesterfield Coton de Tulear
'Alikanay io, Reno. Coton de Tulear izy telo taona ary ny fifalian'ny tranonay. Reno no antony nanapahanay hevitra hiteraka ny Coton. Ny endriny sariaka, tony ary hendry dia tsy mitovy amin'ny alika nananantsika rehetra. Tena alika lehibe amin'ny vatana alika kely izy.
'Reno dia afa-mandainga eo am-pofoantsika na eo an-tongotsika, fa isaky ny manonona ilay teny hoe' ivelany 'dia dodona izy hilalao. Reno TIA milalao Frisbee. Be loatra isika ka tsy maintsy manoratra ny teny F-R-I-S-B-E-E na mihazakazaka anaty faribolana izy ary mandihy amin'ny tongotra roa ambara-pahatonga antsika hahazo ny palitao sy kirarintsika handroaka azy ho azy.
'Fialam-boly ankafizin'i Reno hafa dia ny mitaingina bozaka miaraka amin'ny vadiko. Fantany amin'ny fomba ahoana ny fotoana hanapahana ny ahitra ary miandry azy hanombohana ny fanapahana. Mitsambikina fatratra izy ary hiara-mitaingina aminy mandritra ny adiny roa handavana ny bozaka. Antsoinay hoe 'Kapiteny Reno' izy Sary natolotry ny Cotons of Adam's Eden
'Reno dia iray amin'ireo Cotons telo ananantsika ary azo antoka fa izy no' Mpanjakavavin'ny alika. Mpitondra tena tsara fanahy izy fa raha miala amin'ny filaharana ny iray hafa dia ampahafantariny azy ireo. Rehefa tanora ny alikany dia miambina azy tsara izy, mamela ny hafa hikororoka kely na roa fotsiny fa TSY sosotra mihitsy izy raha ny iray amin'ireo mpianakaviny olombelona na ny sakaizany no mamihina azy ireo.
'Nijery ny Dog Whisperer izahay indraindray ary nahita fa manampy be dia be amin'ny fahitana fifandanjana ao an-tranonay miaraka amin'ireo alikanay. Izaho no mpitarika entana ary ny alikanay rehetra dia nahita ny toerany tao anaty fonosana. Miezaka hatrany aho amin'ny tsy fitoviana sy rivo-piainana milamina ao an-tranonay mba hitazomana fitondran-tena tsara sy tsara amin'ny alikanay. Tena mandeha izy io! ' Sary natolotry ny Cotons of Adam's Eden
Ami, zanak'alika vavy Coton de Tulear
'Ziggy, Coton de Tulear lahy lahy aminay, 8 taona. Malalàn'ny fianakavianay. Ankafizinay izy! '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Coton de Tulear
Sary Coton de Tulear 1
chow afangaro amin'ny mpiandry ondry alemanina
brussels griffon boston terrier mix
ohatrinona ny lehibe azon'ny vorontsiloza
Aostraliana alika mpiandry omby Mix
min pin italiana greyhound mix
sary fahiny sheepdogs anglisy
lokon'ny maso pointer fohy olona